Porofo manga vita amin'ny S-Brilliance Shina, Kitapo manga vita amin'ny rindrina
Description:Sela Brilliant Glass,Fitaovam-panamafisam-peo manga,Kitapo mivalona ho an'ny fiarovana ny arabe,Lamina vita amin'ny hoditra vita amin'ny mofomamy,,
Home > Products > Sela Brilliant Glass
Ny vokatra avy amin'ny Sela Brilliant Glass , mpanofana manokana avy any Shina, Sela Brilliant Glass , Fitaovam-panamafisam-peo manga mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Kitapo mivalona ho an'ny fiarovana ny arabe R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fitsipika fanenon-jiro mitovitovy amin'ny S-Brilliance  Contact Now
JIS R3301 Fahazavana S-Brilliance Glass Beads  Contact Now
Bs6088a / b Fiarovan-jiro miorina tsara tarehy S-Brilliance  Contact Now
EN1423 / EN1424 Fandaharan-tariby fanenan'ny zana-kazo  Contact Now
Fitaovam-pitaratra aforitra afara afara atsinanana  Contact Now
Aashto-M247 Standards Screen Glass Glasses  Contact Now
Ireo fitaovana fanalehibiazina avo lenta ny jiro mitaratra fandrefesana  Contact Now
Ny fitaovana fandraketana an-tsarimihetsika maingoka  Contact Now
Hira felam-boninkazo marevaka marevaka  Contact Now
High Rawness Screen Material Glass Beads  Contact Now
Fandaharam-panofanana Glass Microspheres ho an'ny marika fanjary  Contact Now
S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny felam-paty mafana  Contact Now
Pikantsary miboridana sary mihetsika ho an'ny fampielezan-dàlana  Contact Now
Sla-brilliant Reflective Glasses ho an'ny Paint Traffic  Contact Now
Kitapo mivalona Glass Glasses amin'ny Paint Paint Thermoplastic  Contact Now
Fitaovam-panamafisam-peo aforitra ho an'ny fanoratana fako  Contact Now
Kitapom-bolany fanontam-pirinty ho an'ny sary mihetsika  Contact Now
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Highway Marking Paint  Contact Now
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Fibodoana ny Lakatoerana  Contact Now
Kitaposena vita amin'ny glasy ho fampiharana ny mari-pamantarana  Contact Now
Sla-brilliance Glass For Roadmarking  Contact Now
Fitsipika fanenon-jiro mitovitovy amin'ny S-Brilliance
Fitsipika fanenon-jiro mitovitovy amin'ny S-Brilliance Bilaogy fanenomana brasileur ho an'ny Roadmarking Ny fiverimberenam-pandrenesana dia fomba iray ahafahana mamantatra ny hazavana avy amin'ny lamosina mankany amin'ny mpamily....
JIS R3301 Fahazavana S-Brilliance Glass Beads
JIS R3301 Fahazavana S-Brilliance Glass Beads Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony...
Bs6088a / b Fiarovan-jiro miorina tsara tarehy S-Brilliance
Bs6088a / b Fiarovan-jiro miorina tsara tarehy S-Brilliance Ny fahitana ny mari-pamantarana marin-tampona dia tondroin'ny habetsaky ny hazavana hita taratra amin'ny endriky ny marika amin'ny masin'ny mpamily. Mandritra ny...
EN1423 / EN1424 Fandaharan-tariby fanenan'ny zana-kazo
EN1423 / EN1424 Fandaharan-tariby fanenan'ny zana-kazo EN1424 Fandaharanasam-pamokarana fanenan'ny Standards Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo...
Fitaovam-pitaratra aforitra afara afara atsinanana
Fitaovam-pitaratra aforitra afara afara atsinanana Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia...
Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita amin'ny gilaika...
Ireo fitaovana fanalehibiazina avo lenta ny jiro mitaratra fandrefesana Ny endriky ny kofehy izay fehezina mandritra ny dingana famokarana dia ahitana ireo izay zavatra simika sy ara-batana. Ny singa simika sy ny vatan'ny kavina dia manana...
Ny fitaovana fandraketana an-tsarimihetsika maingoka Ny endriky ny kofehy izay fehezina mandritra ny dingana famokarana dia ahitana ireo izay zavatra simika sy ara-batana. Ny singa simika sy ny vatan'ny kavina dia manana fiantraikany goavana...
Hira felam-boninkazo marevaka marevaka Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho...
High Rawness Screen Material Glass Beads
Ity kofehy vita amin'ny randran-tseza avo lenta ity dia vita tamin'ny raki-peo. Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny...
Fandaharam-panofanana Glass Microspheres ho an'ny marika fanjary
Fandaharam-panofanana Glass Microspheres ho an'ny marika fanjary Ahoana ny fampiasana vatomamy vita amin'ny gorodona amin'ny fitaovana famantaran-dalavaly Ireo kofehy fitaratra dia ampiharina amin'ny fametrahana fitaovana marika...
S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny felam-paty mafana
S-Brilliance Micro Glass Beads ho an'ny felam-paty mafana Kitapo vita amin'ny vera, fantatra ihany koa amin'ny endriky ny vera, microspheres, na microparticles, dia efa nampiasaina nandritra ny 80 taona tamin'ny famantarana sy ny...
Pikantsary miboridana sary mihetsika ho an'ny fampielezan-dàlana
Pikantsary miboridana sary mihetsika ho an'ny fampielezan-dàlana Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja...
Sla-brilliant Reflective Glasses ho an'ny Paint Traffic
Sla-brilliant Reflective Glasses ho an'ny Paint Traffic Ho an'ny kôlôjia mba hamerenana ny hazavana, dia ilaina ny toetra roa: mangarahara ary ny manodidina. Chiye Beads vita tamin'ny fitaratra dia samy manana ireo toetra ireo. Ny...
Kitapo mivalona Glass Glasses amin'ny Paint Paint Thermoplastic
Kitapo mivalona Glass Glasses amin'ny Paint Paint Thermoplastic Ny jiro fandokoana dia anisan'ny fitaovana ara-toekarena indrindra amin'ny fananganana toeram-piofanana azo antoka. Ny marika fampiasa amin'ny arabe ihany no ahitana...
Fitaovam-panamafisam-peo aforitra ho an'ny fanoratana fako
Screen Fitaovana hisainana Glass vakana for Lampivato marika Ny mari-pamantarana goavana sy ny lalamby dia mampiasa karazana loko sy fitaovana manokana. Ny ankabeazan'ny loko marevaka sy ny fitaovana fametrahana marika hafa (PMM) dia misy...
Kitapom-bolany fanontam-pirinty ho an'ny sary mihetsika
Kitapom-bolany fanontam-pirinty ho an'ny sary mihetsika Ireo kofehy fitaratra dia ampiharina amin'ny fametrahana fitaovana marika amin'ny iray amin'ireo fomba telo. Azo alaina amin'ny alàlan'ny fanoratana ireo fitaovana izy...
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Highway Marking Paint
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny Highway Marking Paint Ny fampiharana tsara ny kavina dia miteraka ao amin'ny glossy ambony vita amin'ny fitaratra vita amin'ny vera. Tsy maintsy misy kalitao vita amin'ny kofehy vita...
Kitaposena vita amin'ny glasy ho fampiharana ny mari-pamantarana
Sla-brilliance Glass For Roadmarking
Sla-brilliance Glass For Roadmarking Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara dia ambony kokoa noho ireo...
Shina Sela Brilliant Glass mpamatsy
Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita amin'ny gilaika ara-panandramana miaraka amin'ny fihodinam-bokatra sy ny halavany. Ary ny halavany sy ny haben'ny sokajy dia azo atao araka ny fepetra.
Sela Brilliant Glass Fitaovam-panamafisam-peo manga Kitapo mivalona ho an'ny fiarovana ny arabe Lamina vita amin'ny hoditra vita amin'ny mofomamy S-brilliance Glass Beads